Dokambarotry Ny Tranonkala Shinoa Fitadiavam-Bady Tamin’ny Fahitalavitra Niteraka Sahotaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2014 0:34 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, 日本語, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Raha namoaka dokambarotra noheveriny ho mety tsara sy mamolivoly fo tamin'ny fahitalavitra ny Baihe.com, iray amin'ny habaka lehibe indrindra fampihaonana olona mitady vady ao Shina, dia tsy noeritreretiny velively hiteraka saritaka tao amin'ny tranonkala izany.
Niteraka fitarainana maro an-tserasera ilay dokambarotra, milaza fa mampiroborobo soatoavina dison'ny mariazy amin'ny fanomezana tombondahiny ny fitsinjovana ny fianakaviana. Tamin'ny 6 Feb 2014, nanomana fanentanana tao amin'ny Sina Weibo hanoherana ny Baihe ny mpiserasera “Cai Puning”. Tao anatin'ny roa andro, nihoatra ny 7 tapitrisa ny olona niditra tao amin'ny fanentanana. Nandrisika ry zareo fa tokony hoesorina ilay dokambarotra ary tokony hiala tsiny amin'ny mpiserasera ny Baihe.
Naneho ny heviny tao amin'ny Weibo i “Lao Chao” mpiserasera iray:
Mbola miahiahy kokoa amin'ny tsi-fitovian'ny lahy sy ny vavy entin'ilay dokambarotra i “Gongda Houyuaner“: